အို……ကဗျာ (၀.၀၀၂) – PoemsCorner
ကဗျာဆရာနှင့် ကဗျာဖတ်သူကြား ဖြစ်ပွားသည့် ကိစ္စသုံးရပ်ရှိသည်။ ကဗျာဆရာက ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖေါ်( express ) သည်။ ကဗျာဖတ်သူက ဖတ်(communicate) သည်။ထို.နောက် ဖတ်သူလည်း ကူးစက်ခံစား( Infect )သည်။
ကဗျာဆရာ၏ အလုပ်မှာ ကဗျာတွင်ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖေါ်ရန်သာဖြစ်သည်။ သူ.စိတ်ထဲမှ အစိုင်အခဲကို ဖေါက်ချခြင်းသာ။ပြီးလျှင်သူ.ကိစ္စပြီးသည်။ လူကြိုက်များစေရန်ရေးသူတို.ရှိပါလိမ့်မည်။ စာရင်းထဲမထည့်ပါ။ ကဗျာဆရာသည် ရေးနေရလျှင်ကျေနပ်သူများဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သူ.မှမပြပဲကဗျာရေးနေသူတို. အပုံပင်ရှိပါသည်။ ကဗျာဆရာအဖြစ်မှ တပြားမှမလျော့ပါ။
ကဗျာဖတ်သူကဖတ်မှ ဆက်သွယ်ခြင်းကိစ္စ စတင်ပါသည်။ communication ကို ဆက်သွယ်မှုဟုပြန်ပါသည်။ မကြိုက်ပါ။ အခြားစကားလည်းရှာမရပါ။ ယင်းဆက်သွယ်မှုကို ချဲ.သင့်ကချဲ.ရပါမည်။ ယခု ဓားထစ်မှတ်ခဲ့ပါ။
ထို.နောက် ဖတ်သူထံသို. ခံစားမှုကူးစက်သွားသည်။ ဤတွင်အကျယ်ချဲ.ရပါမည်။ ဖတ်သူ၏ ခံစားမှုသည် ကဗျာဆရာ၏ ခံစားမှု (အတိအကျ) ဟုတ်ပါရဲ.လား။ မသေချာပါ။ အရိုးဆုံးပြောရလျှင် (ဥပမာပေးခြင်းပါ၊မည်သူ.မှမနှိမ့်ချပါ) လမ်းလေးဈေးသည်၏ အသိနှင့် တက္ကသိုလ်ဆရာ၏ အသိမတူနိုင်ပါ။ အကြိုက်မတူနိုင်ပါ။ ခံစားပုံမတူနိုင်ပါ။
စာဖတ်နာသူတစ်ယောက်၏ ခံစားမှုနှင့် ခုမှဖတ်သူ၏ ခံစားမှုမတူနိုင်ပါ။ ထိုအခါ ခံစားမှုကူးပြောင်းခြင်းသည် အတိအကျပြောင်းခြင်းမဟုတ်နိုင်တော့ပါ။ ကဗျာကောင်းမကောင်းမှတ်ချက်များမတူနိုင်ပါ။ ဖတ်သူကွာ၍ကွာရခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကဗျာ့ကိစ္စပြီးမပြီး တွေးစရာဖြစ်လာပါသည်။
ပြန်စဉ်းစားလျှင် ကဗျာဆရာသည် ဖတ်သူကို ကဗျာမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပါသည်။ ဖတ်သူခံယူမှုမတူ၍ ခံစားချက်မတူနိုင်လျှင် ကဗျာသည် ခံစားချက်ကူးပြောင်းမှု ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဖတ်သူများအဆင့်တူသော်လည်း ( ဤသို. ခေတ္တစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်) ကဗျာဆရာ၏ ခံစားချက်အတိအကျ ဖတ်သူထံမရောက်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဆက်သွယ်မှု ကြားခံ (မီဒီယာ)၏ အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
ကိုပြောလိုသော Message(ခံစားချက်) ကို အသွင်ပြောင်းပေး( encode) ရသည်။ ပြီးလျှင် ကဗျာဖတ်သူထံ transmit ထုတ်လွှင့်သည်။ ဖတ်သူက ကဗျာစာသားများထဲမှ နားလည်မှု (တိုက်ရိုက်နားလည်ဟု မဆိုလိုပါ) ကိုရရှိ decode သည်။ ပြီးလျှင်ခံစား Actionသည်။
ကဗျာဆရာက လွမ်းသော်လည်း ငါလွမ်းသည်ဟုရေးရုံနှင့် ဖတ်သူလွမ်းမလာနိုင်ပါ။ ဖတ်သူ၏ အလွမ်းကို နှိုးဆွမည့် ဘာသာစကားကို encode လုပ်ပေးရသည်။ သို.သော် ဖတ်သူမှာမရှိသော အတွေ.အကြုံဆိုလျှင် နားလည်နိုင်မှု၊ကူးပြောင်းနိုင်မှု decoding ၌ အခက်အခဲရှိလာမည်သာဖြစ်သည်။ အကန်းကို အလင်းအကြောင်းပြော၍မရပါ။
ပြောခဲ့သမျှသည် ကဗျာဆရာမှကဗျာဖတ်သူထံ ခံစားချက်ကူးပြောင်းမှု သည် အားနည်းချက်များ၊ဟာကွက်များရှိကြောင်းဖြစ်သည်။ နာမည်မတပ်ခဲ့ပါ။သို.သော် ခံစားမှုသီအိုရီကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်သီအိုရီတစ်ခုမှာ ရသသီအိုရီဖြစ်သည်။ ရသသည်နှစ်သက်ခြင်းသဘော။ ကဗျာဆရာဖွဲ.သည်(ဥပမာအလွမ်း) ကို ဖတ်သူကမရသော်လည်း နှစ်သက်မှု ရလိုက်သည်။
တကယ်တော့ မိဘဆုံး၍ငိုသည်နှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်၍ ငိုသည်မတူကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်၍ငိုရသည်က ရသကိုခံစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငိုရသည်ကိုသာယာနေသည်။ ဦးရွှေအောင်၏ ရသစာပေ၏ရသ ကို အကျယ်ဖတ်ရန်ညွှန်းပါသည်။
In: စကားပြေ Posted By: မော်နီ Date: Apr 7, 2011
Leave comment No comment & 158 views